Reza Jalali inay hogaamiso Xarunta Soo Dhaweynta Muhaajiriinta ee Greater Portland - Amjambo Africa
Reza Jalali inay hogaamiso Xarunta Soo Dhaweynta Muhaajiriinta ee Greater Portland
Reza Jalali, qoraa caan ah, bare, dhaqdhaqaaqe, iyo qaxooti hore oo reer Iiraan ah, ayaa loo xushay inay hogaamiso Xarunta Soo Dhaweynta Muhaajiriinta ee Greater Portland (GPIWC). Magacaabistiisu waxay daba socotaa geedi socod ballaaran oo dalka oo dhan ka socda oo ay ku jireen afartan qof oo codsadayaal ah kuna dhammaaday go’aan loo dhan yahay oo ay qaateen guddiga raadinta. Kaalinta agaasimaha fulinta waxay noqotay mid banaan kadib markuu si lama filaan ah udhaafay aasaasaha iyo Agaasimaha Fulinta.
Alain Jean Claude Nahimana bishii May. Booska waxaa la buuxiyay tan iyo markii uu Nahimana si ku meel gaar ah u wareejiyay Shima Kabirigi, oo sidoo kale ah aasaasaha Xarunta Soo dhaweynta Muhaajiriinta ee Greater Portland.
Waxaan u arkaa inay tahay dib u bixinta deymihii aan ku lahaa dowlad i siisay fursad aan ku bilaabo nolol cusub. Waxaan si qoto dheer u sharfay kalsoonida dadka kale igu qabeen, \_”ayuu yiri Jalali, isagoo raaciyay,\_” Shaqada Xarunta waa sidaasmuhiim ah. Way iga weyn tahay aniga – aad ayey uga weyn tahay qof kasta. Waxay xiriir dhaw la leedahay mustaqbalka gobolka. ”Welcome Xarunta Soo-dhaweynta Muhaajiriinta ee Weyn ee Portland waa xarun ku saleysan Portland, oo ah hay’ad aan macaash doon ahayn oo u adeegta xarun ay ururada iyo shaqsiyaadku iska kaashadaan oo ka caawiya bulshada soogalootiga ah ee soo koraya ee Maine inay si buuxda u gaaraan bulsho ahaan, dhaqaale ahaan , iyo kartida bulshada. Xarunta sadexdeeda tiir barnaamij waa Xarunta Ganacsiga Muhaajiriinta, Mashruuca English, iyo Jinsiyadda iyo Ka Qeybgalka Bulshada.
IWC waxaa la aasaasay bishii Luulyo 2017. Markii ay aasaaseyaashii Nahimana, Damas Rugaba, iyo Kabirigi ay bilaabeen Xarunta, waxay doonayeen inay beddelaan wadahadalka ku saabsan socdaalka. Nahimama wuxuu ku sharaxay maqaal Maarso 2019 daabacadan inay rabeen inay ka caawiyaan “keenista sheeko cusub, oo ka tagaysa mowqifka difaaca iyo dhisida mowqif firfircoon.” “Waan ogahay inaan taaganahay garbaha kooxaha Waxaan hayaa kabo waaweyn oo aan buuxiyo, ”ayuu yiri Jalali. Wuxuu carabka ku adkeeyay inuu qorsheynayo si loo sii wado dhaxalka Nahimana ee adag, ha ahaato gudaha Maine iyo heer qaran. Ala “Alain Nahimana wax badan buu ina baray. Degganaanshihiisu aad ayey muhiim u ahayd, wuxuuna lahaa himilo, riyo u ah soo galootiga ku nool Maine. Wuxuu dhamaanteen nagu bilaabay waddo, dad badana waxay sameeyeen ballanqaad si loo hubiyo in riyadiisu ay sii jiri doonto muddada dheer.
Sharaf ayey ii tahay inaan helo taageerada bulshada iyo guddiga si aan u sii wado dhaxalkiisa, \_”ayuu yiri Jalali.\_” Kabirigi wuxuu dib u milicsaday Xarunta lixdii bilood ee ugu dambeysay. Luminta xubinteenii wada aasaasiga ahayd iyo agaasimihii fulinta, Alain Nahimana, oo ay weheliso aafada adduunka, waxay si ba’an u saameysay GPIWC, shaqaalaheeda, iyo guddiga. Waxaa naloo imtixaamay siyaabo badan, laakiin waxaan muujinay adkeysi iyo adkaysi. Adkeysigeena wuxuu si toos ah uguxiranyahay balanqaadkeena aan kala go’a laheyn ee ku aadan himiladeena iyo qiimaheena.
Waxa aan abuurnay seddex sano ka hor, ma aha oo kaliya inay la midoobaan bulshadeena laakiin waxay ka tarjumaysaa himiladii aan qabnay markii aan abuurnay ururkan, in soogalootiga oo dhami ay gaaraan awooddooda bulsho, dhaqaale, iyo bulsho ee buuxda. Waxaan rajeynayaa in Reza ay nagu hogaamiso himiladaas. ” Kossi Gamedah, Xubin ka tirsan Gudiga isla markaana ah Gudoomiyaha Gudiga Raadinta ayaa tiri, “Gudiga baaritaanka iyo GPIWC way ku faraxsanyihiin natiijada baaritaanka Waxaan u mahadcelineynaa Ian Yaffe, Cathy Lee, Adele Ngoy, Kim Anania, Michael Brennan, Shima Kabirigi iyo intii ka qeyb qaadatay raadinta ama muujiyey xiisaha ay u qabaan jagada.
Mahad gaar ah Kim Anania oo ka tirsan KMA HR doorkeeda geedi socodka. Jagada ayaa soo jiidatay hodan badan oo kala duwan oo musharaxiin ah. In kabadan afartan codsi ayaa laga helay wadanka oo dhan. Ugu dambeyntiina, waxaan ognahay in hoggaanka Reza iyo xiriirka qotada dheer ee uu la leeyahay Maine iyo bulshooyinka aan u adeegno, ay noqon doonaan hanti aad u weyn oo ku aaddan howlaha iyo himilada GPIWC. ” iyo himilada. ”Jalali muddo dheer ayuu deganaa Maine.
Wuxuu wax ka baray Jaamacadda Koonfurta Maine (USM) iyo sidoo kale Bangor Fiqi Seminary. Laga soo bilaabo 2006 ilaa 2017, Jalali wuxuu isku dubariday Xafiiska USM ee Arimaha Ardayda Dhaqamada Kala Duwan, wuxuuna kormeeray Xarunta dhaqamada badan ee USM Ugu dambayntiina, wuxuu noqday La Taliyaha Gaarka ah ee sinnaanta iyo ka mid noqoshada Madaxweynaha ee USM. Wuxuu aasaasay xarunta u doodista soogalootiga ee Portland, xafiisna ku leeyahay Kaniisaddii hore ee Chestnut Street Methodist. Xaruntu waxay u adeegtay sidii guri loogu talagalay isbahaysiga kooxihii hore ee soo galootiga ee Maine. Isbahaysigaas waxaa lagu tiriyaa abuuritaanka aasaasidda hay’ado badan oo muhaajiriin ah oo aasaasay oo muhaajiriinta maamulaan sannadihii dambe. xeryaha Turkiga iyo Bosnia.
Wuxuu kaqeyb galay shirar badan oo caalami ah oo ay soo qaban qaabisay Qaramada Midoobay waxaana lagu casuumay Aqalka Cad isagoo qeyb ka ah wafdi heer qaran ah oo kala hadlaya xaalada qaxootiga Kurdiyiinta ee ka qaxaya Ciraaq Isagu waa qoraaga buugaag dhowr ah, oo ay ku jiraan buuga carruurta, Moon Watchers Shirin’s Ramadan Miracles, oo helay Abaalmarinta Sharafta Skipping Stones. Buuggiisa soo socda, oo ay wada-qoreen Morgan Rielly, ayaa ka sheekaynaya sheekooyinka soo galootiga Maine waxaana lagu wadaa in la daabaco Juun 2021.
Buuggu waa qayb ka mid ah taxane cusub oo loo yaqaan ‘New Mainers’ 2009, oo uu qoray Jalali. Wuxuu haystaa shahaadada mastarka ee maamulka adeegyada aadanaha ee Antioch New England Graduate School iyo MFA ee Qoraalka Hal-abuurka ee USM. Jalali wuxuu kasoo shaqeeyay guddiyo farabadan hadana wuxuu xubin ka yahay Maine Arts Commission, guddiga latalinta ee New England Arab American Organization, iyo Aasiya American Association of Maine. Wuxuu ku nool yahay Falmouth isaga iyo xaaskiisa Jaleh Hojjati, waana aabbaha labo carruur ah oo koray ~Guddoomiyaha guddiga Mary Allen Lindemann ayaa tiri, \_”Shima, guddigayaga baaritaanka, guddiga iyo shaqaalaheennu waxay qabteen shaqo aan caadi ahayn lixdii bilood ee la soo dhaafay si loo hubiyo in Xaruntu ay sii wadday shaqadii horeyba u jirtay iyadoo la maareynayo caqabadaha badan ee Covid soo bandhigay, oo ay weheliso geeridii lama filaanka ahayd ee Agaasimeheenna Fulinta. Nasiib badan kuma yeelan karno inaan helno qof leh khibradda Mudane Jalali, mid shaqsi iyo mid xirfadba leh, si aan ula wareegno hoggaanka Xarunta markii aan horay u socono. ”
Waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo GPIWC iyo Mudane Reza Jalali doorkiisa cusub ee Agaasimaha Fulinta,\_” ayay tiri Clemence Nahishakye, oo ah hooyada Alain Jean Claude Nahimana. \_”Mudane. Taariikh nololeedka Jalali wuxuu muujinayaa inuu waxyaabo badan ka siman yahay wiilkayga Alain Jean Claude – inta badan dareenka bulshada, qiyamka loo dhan yahay, iyo rabitaanka ah in marwalba la caawiyo dadka kale. Rajadaydu waxay ahayd in dhaxalka wiilkayga uu la wadaago qiyam la mid ah sidaa darteed aragtidiisa, dhaxalkiisa iyo u doodiddiisa hagar la’aanta ah ee xuquuqda madaniga iyo soogalootiga ayaa sii socon kara. Nasiibka ugu wanaagsan iyo ducooyinka Mudane Reza Jalali. ”M Gudoomiye Mills ayaa raacisay bogaadinteeda, waxayna tiri,“ Reza waa saaxiib waxaan xushmeynayaa hibadiisa balaaran iyo tan weyn taasoo si wanaagsan ugu adeegi doonta Xarunta soo dhaweynta Muhaajiriinta ee Greater Portland. Waxaan urajeynayaa isaga kan ugu wanaagsan waxaana rajeynayaa inaan lashaqeeyo. ”
Haweeneyda Congressing-ka ah ee Pingree ayaa tiri, “Alain Nahimana wuxuu ka tagay kabo waa weyn si uu u buuxiyo Xarunta Soo-dhaweynta Muhaajiriinta ee Greater Portland, waana ogahay in Reza Jalali uu doorkan si naxariis leh ku qaadan doono. Markii uu yimid Maine qaxooti ahaan in ka badan 30 sano ka hor, wuxuu xiriir qoto dheer la leeyahay soo galootiga iyo bulshooyinka qaxootiga ku ah gobolkeenna. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko magacaabistiisa Agaasimaha Fulinta cusub waxaanan rajaynayaa inaan la shaqeeyo isaga oo taageeraya deriskeena cusub. ”
Jalalid wuxuu si rasmi ah ula wareegay doorka Agaasimaha Fulinta bishii Diseembar 21
PreviousAFRIKA “SADDEXDII MUDDO” MAANIYA elections Doorashooyinkii madaxtinimada ee dhowaan ka dhacay Guinea iyo Ivory Coast
NextDoorka Eritrea ee Colaadda Itoobiya